२४ वर्षीया उरुसा मानन्धरकको छर्रा ढाडबाट छिरेर छातिबाट निस्कँदा… – Korea Pati
२४ वर्षीया उरुसा मानन्धरकको छर्रा ढाडबाट छिरेर छातिबाट निस्कँदा…
February 24, 2019 LeaveaComment on २४ वर्षीया उरुसा मानन्धरकको छर्रा ढाडबाट छिरेर छातिबाट निस्कँदा…
ललितपुर : बनेपा–८ की २४ वर्षीया उरुसा मानन्धरलाई शनिबार दिउँसो करिब २ बजे मेडिसिटी अस्पतालको पोस्ट अपरेसन वार्डबाट जनरल वार्डमा सारियो। लगत्तै हजुरआमाको फोन आयो। उनी कुरा गर्न थालिन् तर बक् फुटेन। त्यसपछि उनको हातबाट एक आफन्तले हत्तपत्त मोबाइल थुतिन्। उरुसासँगै उनका बुवा सुरेन्द्रकाजी र आमा कृष्णदेवी पनि रुन लागे। उनी ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि शुक्रबार भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकी थिइन्।
‘एनेस्थेसियाले होला अहिले दुखेको छैन’, घरि रुँदै घरि हाँस्दै उनले भनिन्। देब्रे गोलीगाँठाको हाड टुक्राटुक्रा भएकाले दुईपल्ट शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। उनको उपचारमा डा. राज राना र निभा चित्रकार रहेको अस्पतालकी मिडिया संयोजक मनिता पोखरेलले जानकारी दिइन्। ६ महिनायता मेडिसिटीमा कार्यरत थिइन्। उनका बुवाका अनुसार भारतको बंगलोरमा बीएससी नर्सिङ सकेर आएकी हुन्। डेढ वर्ष कोलकातामा काम गरेर ७ महिनाअघि मात्र घर फिरेकी हुन्।
सुरेन्द्रकाजीका अनुसार अन्य दिनभन्दा शुक्रबार अबेरसम्म ड्युटी परेकाले अस्पतालको स्टाफ बस छुट्यो। उनले घर फर्कन दाजुलाई बोलाइन्। बनेपाबाट आउजाउ गर्न कठिन भएकाले नैकापस्थित मामाघरमा बस्ने गरेकी थिइन्। दाजुसँग मोटरसाइकलमा जाँदा बमले खुट्टामा भेट्टायो। आमा कृष्णदेवीले भनिन्, ‘नानु भाग्यले बाँची।’ उनले पछिल्तिर ब्याग बोकेकी थिइन्, त्यसमा टिफिनको बट्टा पनि थियो। टिफिन टुक्राटुक्रा भएको छ। उरुसाले भनिन्, ‘धन्न टिफिनले ढाड बचायो।’ विस्फोटमा उनको जुत्ता पनि फाटेको छ।
खबर पाउनासाथ उनका बुवा अस्पताल आए पनि आमालाई केही बताइएको थिएन। त्यसैले आमा शनिबार बिहान मात्र अस्पताल आइन्। छोरी खतरामुक्त रहेको थाहा पाएर ढुक्क भएको सुनाइन्।
अर्की घाइते प्रतीक्षा खड्काकोे उपचारमा डा. अनिल आचार्य व्यस्त छन्। उनी मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्। शुक्रबार राति नै शल्यक्रिया गरी उनको ढाडबाट धातुको टुक्रा निकालेको पति रितेश खड्काले बताए। ‘प्रेसर कुकरको सिट्ठी ढाडबाट छिरेर छातिबाट निस्कन लागेको थियो’, रितेशले भने।
ढाडबाट छिरेर छातिबाट बमको छर्रा निस्किँदा डाक्टरले प्रतीक्षाको फोक्सो र करङमा चोट लागेको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए।
उनीहरू माछाको चारो किनेर मोटरसाइकलमा फर्कंदै थिए। सुरुमा प्रतीक्षाले के भयो थाहै पाइनन्। ‘ढाडमा दुख्यो के भयो मात्रै भनिन्’, पत्नीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘नख्खुबाट घर पुगेर हेर्दा ढाड रगताम्य थियो।’ त्यसपछि चक्रपथमा वनवे भएकाले उपचारका लागि भनिमण्डलस्थित अल्का अस्पताल लगेको बताए। त्यहाँबाट राति नै मेडिसिटी लगियो। प्रतीक्षाका ५ बर्से छोरा छन् भने ससुरा बितेको ४५ दिन मात्र पुगेको छ। बागडोलस्थित तोरण नवजीवन स्कुलमा काम गर्छिन्।
बुवाको निधनपछि दुबईबाट फर्केका रितेशले भने, ‘ढाडबाट छिरेर छातिबाट बमको छर्रा निस्किँदा पनि खतरामुक्त हुनु भाग्यको कुरा हो।’ डाक्टरले फोक्सो र करङमा चोट लागेको हुनसक्ने शंका गरेका थिए। कुनै पनि अंग र नशा नछोई मांसपेशी हुँदै छर्रा निस्केकाले उनी जोखिममुक्त भएकी हुन्।
ठूलै घटनाबाट बाँच्न सफल भए पनि यसलाई उरुसा र प्रतीक्षाका परिवारले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। सरकारले घटनाको गम्भीरता हेरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले भने, ‘सर्वसाधारणले सुरक्षा अनुभूत गर्नुपर्छ।’
अवकासप्राप्त सिंगापुरे प्रहरी थिए गुरुङ
जीआर १४०४८ का पूर्वप्रहरी थिए ४९ बर्से सिंहप्रसाद गुरुङ। सिंगापुर प्रहरीमा २८ वर्ष पूरा गरी ६ वर्षअघि स्वदेश फिेका। स्थायी घर लमजुङ भएका उनी भैंसेपाटी बस्थे। निजी गाडीमा आएका उनले एनसेलको कार्यालयनजिकै पार्क गरे र बाटो काट्न थाले। त्यसै बेला विस्फोट भयो। उनका २ छोरीमध्ये जेठी अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत छिन् भने कान्छी ११ र छोरा ६ कक्षामा पढिरहेका छन्।
दाजु श्यामप्रसादका अनुसार घटनापछि उनकी पत्नी अझै बोल्न सकेकी छैनन्। सिंगापुर सरकारले अवकाशप्राप्त व्यक्तिको मृत्युपछि पत्नी र परिवारलाई पेन्सन नदिने उनले बताए। यसबाट छोराछोरीको अध्ययन र पालनपोषणको समस्या आउने भएकाले सरकारले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि शनिबार पाटन अस्पताल लगिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अस्पताल पुगेर घाइते र मृतकका परिवार भेटे। उनले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने र छानबिन गर्ने आश्वासन दिए।
बावुको हत्या र भाईलाई खुकुरी प्रहार गर्नेलाई साढे ३७ वर्षको सजाय
चन्दामा कुरा नमिलेपछि एनसेललाई तर्साउन विस्फोट, ज्यान गयो सर्वसाधारणको
दौडिने पानी जहाजको खोजी र भाग्यमानी शेरबहादुर देउवाको भाग्य !
कोरिया जान रोकिएका श्रमिकलाई एक हप्ताभित्र निर्णय दिने श्रममन्त्रीको आश्वासन !
June 8, 2021 June 9, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
इपिएस पिडितको पक्षमा फेरि बोल्यो एमटियु, प्रक्रिया पुगेका श्रमिकलाई तत्काल कोरिया ल्याउन माग
June 7, 2021 June 7, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
सुवनको रे’ड लाईट एरिया जुन १ तारिखदेखी बन्द !
June 6, 2021 June 6, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने